हार्दिक बधाई ! ज्ञानज्योतिका सगुन भए चार्टर अकाउन्ट (सिए) का नेपाल टपर – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/हार्दिक बधाई ! ज्ञानज्योतिका सगुन भए चार्टर अकाउन्ट (सिए) का नेपाल टपर
ज्ञानज्योति माविबाट कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेका सगुनजंग राणाले चा’र्टर अ’काउन्ट (सिए) को परीक्षामा नेपाल टप गरेका छन् । इ’न्ष्टिच्युट अफ चा’र्टर ए’काउन्ट अफ नेपाल (आ’इक्यान) ले भर्खरै प्र’काशन गरेको न’तिजा अनुसार परीक्षामा नेपालभरबाट स’मावेश भएका करिव ३ हजार विद्यार्थीमा उनले ७२.५७ प्रतिशत अंक ल्याएर राणा नेपाल उत्कृष्ट भएका हुन् ।
उनले क्या’प टु’मा अहिलेसम्मकै नतिजालाई व्रे’क गरेका हुन् । यो भन्दा अगाडि क्या’प टुमा ७्र्र्र० प्रतिशत मात्रै नतिजा ल्याएको इ’तिहास रहेको छ । उनले क्या’प वानमा चौथो स्था’न हा’सिल गरेका थिए । चार्टर ए’काउन्टमा क्या’प थ्री सम्म अ’ध्यापन हुने गरेको छ ।न’तिजाले मलाई निकै उ’त्साहित वनाएको छ ” रानाले भने ।
उनले ज्ञानज्योति माविबाट विज्ञान सं’काय अन्तर्गत प्रदेशमै उ’त्कृष्ट अंक ल्याएको कलेजका प्राचार्य सुरेन्द्र जिसीले वताए । उनले यो न’तिजाबाट विद्यालयको उ’चाई समेत व’ढेको जानकारी दिए ।
विदेशबाट १६० जनाको शव नेपाल ल्याई आफन्तको जिम्मा लगाइयो
विदेश जान थाले नेपालमा बनेका सुनका गरगहना !
धुर्मुस सुन्तलीले बनाएको नमूना बस्तीमा चिसोबाट एकै परिवारका तीनको मृ’त्यु